Guddoomiye Muungaab oo dhagax dhigay mashruuc laami lagu saarayo Isgoysyada Sayidka iyo Baar Ubax “SAWIRRO + Muuqaal” – Radio Muqdisho
Guddoomiye Muungaab oo dhagax dhigay mashruuc laami lagu saarayo Isgoysyada Sayidka iyo Baar Ubax “SAWIRRO + Muuqaal”
Guddomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc laami lagu saarayo inta u dhexeysa isgoysyada Sayidka iyo Baar Ubax ee magaalada Muqdisho.
Mashruucaan laamiga lagu saarayo jidka u dhexeysa labadaasi isgoys ayaa waxaa iska kaashanaya Maamulka Gobolka Benaadir iyo ganacsatada Suuqa Bakaaraha, si loo soo celiyo bilicdii ay caasimaddu lahayd, waxaana bar bar socotay bur burinta dhismayaasha sharci darada ah oo ku yaala wadada hareeraheeda.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag Axmed Nuur Cali Siyaad oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in dib u habeynta laamiyada ay qeyb lixaad leh ka qaadan karto in ay dib u soo laabato bilicdii magaaladu lahaan jirtay.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo furay mashruuca lagu saarayo laamiga ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay horumarka dalka iyo bilicda Muqdisho, isagoo ugu baaqay bulshada in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka.
“Ma ahan laami la dayactirayo, ma ahan in shamiindo lagu shubayo meel god ah, sida aan ka baranay Walaalaha Turkiga ayaan u dhiseynaa laamigan oo aan jecelnahay inay ku soo baxaan qurux” ayuu yiri Muungaab.
Guddoomiyaha Gobolka ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan mashruuca dalkaaga dhiso, si loo soo celiyo adeegyada aas aasiga u ah bulshada.
Mashaariic lagu horumarinayo dalkaaga dhiso ayaa ah mid uu horey ugu dhawaaqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Bulshada oo laga codsaday dib u dhiska Masjid ku yaalla Boondheere “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo ka tacsiyeeyay geerida Dr Kadare